Ngaphambi sika bob isikwele nge isandiso, kuhle ukucabangela ukuthi lokhu kwekhanda ofanele kakhulu labo amantombazane anqophileko izinwele ukuthungwa, noma, okungenani, mihlobiso. Kuyinto engathandeki ukuba baphathe amantombazane abanale ezisontekile futhi obukhulu.
imishini Kuyadingeka: sikelo kahle iloliwe, wezinwele njalo ikamu ngamazinyo emihle, nekama a "umsila", wafutha ngamanzi afudumele, iziqeshana zokuthola izikhonkwane.
Kare nge ukunwebeka, yokugunda isikimu
Ngaphambi ukusika kumelwe uxubha kahle amabombo usebenzisa imoto bese namafutha. Manje ungenza bob isikwele nge isandiso. Ngosizo ikamu "nge nomsila" kufanele kube ngokulinganayo ukwehlukana izinwele zibe izingxenye ezimbili. Okulandelayo, udinga ukwenza sokuvalelisa ovundlile ohlangothini ezindlebeni umugqa ngamunye. Izingxenye okuholela kufanele abashone hairpin zihlukanise kubo ukuze ungagxambukeli inqubo yokugunda. Splayed ungagcina Ezansi eyodwa kuphela.
Bob-bob nge isandiso
Ngosizo ikamu elula kusukela Strand phansi, eduze entanyeni, kubalulekile ukuba unqamule encane ovundlile Strand ububanzi nguhhafu isentimitha. Khona - kancane ubambe Strand ngokusebenzisa iminwe yakhe ukuze phansi, ukuzama sokuyiphungula esandleni sakhe. Khona-ke, kudingeka sithole ubude oyifunayo kwesikwele futhi usike phansi njengoba izinwele okuningi njengoba udinga ukuba uwufinyelele. Isimiso esifanayo kufanele ihlukaniswe waquma ukukhiya izinwele lesibili Ezansi, bese kudingeka ukuba ubuyele emuva kuqala, ukwaba isigamu isentimitha noma isentimitha umucu izinwele, futhi ukuqhathanisa ubude bayo enezinwele ezinde, Strand okuyinto esanda ukusika. Zonke izingxenye ezilandelayo kufanele usike ngendlela ukuthi uqondane futhi zilingana Imi lokuqala. Kubalulekile ukwazi ukuthi ukuze uboya nezinwele yemvelo futhi kulula ukulingana, usike imikhawulo ungenalo engela kwesokudla futhi i-engela 15 ° maqondana imicu odlule.
Bob ukugunda izinwele nge ukunwebeka. whiskey
Uma zombili izingxenye okuqoqiwe ukuba ukuhlukana kwabo ovundlile, kubalulekile ukuba idluliselwe wemfanelo Ukusincwela sideburns. Ukuze uthole ubuchwepheshe obufanayo kumele sihlukaniswe Strand, okuyinto ezansi. Ungakhohlwa futhi mayelana umswakama. Strand azinikezele kudingeka donsa bebheke wahlukanisa mpo. Ubude Strand nethempeli kumele kuqhathaniswa ne ubude yesikhashana ingxenye. Futhi, okuhle kuphela ukuqhathanisa kubo, udinga uyonquma semikhawulweni imicu. Isimiso esifanayo kufanele ihlukaniswe futhi usike elingenhla Strand ethempelini. Uma zonke izinwele uzobe okuqoqiwe, kubalulekile ukucubungula emikhawulweni izinwele kanye isheke. Indlela efanele futhi ngokuphumelelayo awazange izinwele ukunqampunwa, ubude ephelele bungatholakala kuphela emva ngokucophelela Ukunquma kubo. Ungakhohlwa neyokuthi ithempeli kanye izinwele kumelwe inqunywe ngezinga oyifunayo ngenhlonipho kulowo eyedlule.
Bob-bob nge isandiso - lokhu ukugunda izinwele Kufanele kube flat ngokuphelele, ngakho-ke kuyadingeka ukuncibilikisa izinwele futhi ngokucophelela nekama kubo, futhi baqala ukuqhathanisa ubude ngamunye ingxenye ngabanye. Ezimweni lapho ingxenye ethile, ngisho noma kancane kuphela, kodwa isikhathi eside badinga ukuze usike. Stizhka pod nge isandiso kusho ngokwayo ukuthi izinwele ngamunye isikwele ukuba esikhundleni, futhi ngeke abelwe noma, ikakhulukazi, kufushane. I wesimethri we kwekhanda nakho kubalulekile kakhulu. Ukuze ukuhlole, kumelwe uthathe esisodwa sivala yesikhashana nhlangothi zombili ukudonsa phambi kobuso babo bese uqhathanisa indlela ziyafana. Kubalulekile ukuthi zombili lezi izingxenye babe zobude obulinganako. Uma athé ukwehluka, kumele balungise khona ngokucophelela. Ungase futhi uhlole yonke eminye zingu amathempeli. Ngemva kokuthola iziqu ukugunda izinwele kungaba waphinda kancane uxubha izinwele kahle ikusebenzise ome umshini wokomisa izinwele.
Izinwele Brown kuyinto umbala izinwele?
Yiziphi izinhlobo zezingoma ezenzekayo
Garnier «Olia» - Hair Beauty Palette
Holiday ekhaya edolobheni nge-swimming pool nezingane. Top ekhaya iholidi edolobheni nge swimming pool kanye ukudla
Enforcement ekuqhutshweni bailiffs: zokukhokha. komthetho we-civil
. M. Yu Lermontov, "Ingelosi": ukuhlaziya inkondlo